Online Hartha, Author at Online Hartha - Page 602 of 607
ဒေးဗစ်လား၊ အဆိုတော်မျိုးကြီး အပါအဝင် မြန်မာပြည်က ကိုဗစ်လူနာများ အခြေအနေ
April 28, 2020 by Online Hartha
ဓာတ်ခွဲနမူနာများတွင် နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက် ပိုးမတွေ့သူ စုစုပေါင်း ၁၆ ဦးရှိကြောင်း ယမန်နေ့ည ၈ နာရီသတင်းမှာ ဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပထမအသုတ် ၁၀ ဦးမှာ လူနာနံပါတ် ၃,၄,၇,၉,၁၀,၁၁,၁၂,၁၅,၂၁ နဲ့ ၂၇ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ၆ ဦးမှာ လူနာနံပါတ် ၆,၁၉,၂၀,၂၄,၂၅ နဲ့ ၂၉ တို့ဖြစ်ပါသည် တစ်ကြိမ်စီ Negative ဖြစ်သောသူများထဲတွင် အဆိုတော်မျိုးကြီး ၎င်း၏ဇနီးနှင့် ဒေးဗစ်လားပါဝင်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ တီးတိန်လူနာ နံပါတ် ၁ ကတော့ ၆ ကြိမ်မြောက် (၂၄-၄-၂၀၂၀) တွင် Negative တစ်ခါရရှိပြီးဖြစ်ပါသည် အထူးကြပ်မတ်ကုသမှုခံယူနေသောလူနာ ၃ ဦးရှိပါသည် ဝေဘာဂီဆေးရုံတွင် လူနာနံပါတ် ၈၇, ၈၉ နှင့် တောင်ဥက္ကလာပဆေးရုံတွင် လူနာနံပါတ် ၁၁၀ တို့ဖြစ်ပါသည် … Read more
Covid-19 ကပ်ရောဂါအား အနိုင်ရလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း နယူးဇီလန်နိုင်ငံ ကြေငြာ
Covid-19 ကပ်ရောဂါအား အနိုင်ရလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း နယူးဇီလန်နိုင်ငံ ကြေငြာ၊ အမြင့်ဆုံး ကန့်သတ်ချက်များ လျှော့ချ… ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက် အမြင့်ဆုံးကန့်သတ်ချက် အဆင့် ၄ အဖြစ် ရက်သတ္တ ၅-ပတ်နီးပါးကြာမျှ တင်းကြပ်ခဲ့ရသော နယူးဇီလန်နိုင်ငံသည် တနင်္လာနေ့နှောင်းပိုင်းမှစတင်ကာ ကန့်သတ်ချက် အဆင့် ၃- သို့ လျှော့ချလိုက်သည်ဟု AFP က ရေးသားထားသည်။ လတ်တလော ကမ္ဘာကြီးတစ်ခွင်လုံးတွင် Covid- 19 ကူးစက်ကပ်ရောဂါကျရောက်လျှက်ရှိသည်။ နိုင်ငံတိုင်း ကူးစက်ရောဂါဒါဏ်ခဲ့စားခဲ့ကြရာ၌ နိုင်ငံသားတို့ ဖျားနာပျက်စီးရခြင်းဦးရေကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်နှင့် နိုင်ငံ့စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များအား ထိရောက်စွာ အချိန်ကိုက်ဆောင်ရွက်ရာတွင်မူ နိုင်ငံအနည်းငယ်၌သာ တုန့်ပြန်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ဤတွင် ကပ်ရောဂါကို ကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်ယုံမက အသက်သွေးကြောလုပ်ငန်းများအား နိုင်နင်းစွာ စီမံခန့်ခွဲ ခဲ့သူများမှာမူ အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်များဖြစ်နေသည်။ ဥရောပမှ ဂျာမနီနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် … Read more
အင်းစိန် GTI မှာ Quarantine ဝင်တဲ့သူများက Volunteers တွေကို ပေးသွားတဲ့ လက်ဆောင်… အင်းစိန် GTI မှာ Quarantine ဝင်တဲ့သူများက ကျွန်တော်တို့ Volunteers တွေကို အိမ်အပြန်လက်​ဆောင်ပေးသွားသေးတယ်.. အခန်းထဲမှာ မစင်စွန့် အမှိုက်တွေကို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ပစ်တယ်… ဒီလောက်လိုလေသေးမရှိ ​အစားအသောက်၊ သန့်ရှင်းရေး ၊ကျန်းမာရေး ၊ ကုတင်စောင်ခြင်ထောင် ၊ ရေချိုးခန်းအိမ်သာ WiFi ကအစ အားလုံးဖြည့်စည်းပေးတာတောင် စည်းကမ်းရှိရှိ မနေထိုင်ကြဘူး… နောက်အသုတ် ထိုင်းနိုင်ငံက ပြန်လာတဲ့ပြည်တော်ပြန်များကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ အင်းစိန် Quarantine Crnter ကနွေးထွေးစွာကြိုဆိုအုံးမှာပါ.. အင်းစိန် GTI မှာ နောက်လာရောက်မည့် Quarantine ဝင်တဲ့သူများ စည်းကမ်းရှိစွာနေထိုင် စေချင်ပါတယ်… Thurein Tun unicode အငျးစိနျ … Read more
သင့်မွေးရက် ကပြောတဲ့ သင့်ဖူးစာရှင်/သင့်ချစ်သူအကြောင်း..
သင်ဟာ…1ရက်နေ့ မွေးသူ ဖြစ်ရင် သင့် ချစ်သူ ဟာ တတ်တတ်ကြွကြွရှိမယ် ဖြတ်ထိုးဥာဏ် အလွန်ကောင်းပြီး လူတဖက်သားကို ကူညီတတ်မဲ့သူတျောက်ဖြစ်တယ်။သင့်အတွက်ဆို လိုချင်တာဖြည့်စည်းပေးမယ့် သူဌေးကြီးတျောက်လိုပါပဲ… 2ရက်နေ့ မွေးသူ ဖြစ်ရင်… သင့် ချစ်သူ ဟာ ကြင်နာယုယတတ်တယ်။ သင့်ကိုအမြဲဂရုစိုက်တတ်ပြီး အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင် ပါရမီပါသူတျောက်ဖြစ်တယ်။သင့်အတွက်ဆိုမမေ့နိုင်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဒွေ ဖန်တီးပေးမယ့်သူတျောက်ပါပဲ။ 3ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်… သင့်ချစ်သူဟာ စိတ်လိုက်မာန်ပါလုပ်တတ်တယ်။ ဆရာကြီး လုပ်ရမှာကျေနပ်ပြီးအမှားလုပ်မိရင်လည်း တောင်းပန်ဖို့ဝန်မလေးသူတျောက်ဖြစ်တယ်။သင့်အတွက်ဆို အခက်အခဲတွေကို တူတူဖြတ်ကျော်မယ့် လက်တွဲဖော်ကောင်း တျောက်ပါပဲ.။ 4ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်… သင့် ချစ်သူ ဟာ စိတ်နေသဘောထားကြီ်းတယ်။ လက်တွေ့အကောင်ထည်ဖော်လုပ်ဆောင်ရမှကျေနပ်သူတျောက်ဖြစ်တ်တယ်။ သင့်အပေါ် နည်းနည်းလေး အနိုင်ယူရမှ ကျေနပ်နေသူတျောက်ဖြစ်တယ်။ 5ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်… သင့်ချစ်သူဟာ ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး လူချစ်လူခင်များတတ်သူတျောက်ဖြစ်တယ်။သင့်ကို အမြဲအားပေး ကူညီချင်တဲ့ သူ တျောက်လည်းဖြစ်တယ်။ 6ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်… သင့် ချစ်သူ … Read more
နတ်ကိုင်ကြမ်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့သစ်ပင်ကြီးအောက်က နတ်ရုပ်ကြီးကို တံတားလုပ်တက်နင်းဖြတ်တဲ့လူရဲ့ဖြစ်ရပ်…
နတ်ကိုင်ကြမ်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့သစ်ပင်ကြီးအောက်က နတ်ရုပ်ကြီးကို တံတားလုပ်တက်နင်းဖြတ်တဲ့လူရဲ့အဖြစ် နတ်ကိုင်ကြမ်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့သစ်ပင်ကြီးအောက်ကနတ်ရုပ်ကြီးကို တံတားလုပ်တက်နင်းဖြတ်တဲ့လူရဲ့အဖြစ် လူကောင်းကို အနိုင်ကျင့်ရတာ လွယ်တယ် ၊ ပုံပြင်ကလေးက ဒီလိုဗျ… တခါက ရွာတရွာမှာ ရွာဦးနတ်ကွန်းဘေးမှာ ရေနှုတ်မြောင်း ဖြတ်စီးနေတယ် နတ်ကွန်းထဲက နတ်ရုပ်က မတ်တတ်ကိုယ်တော်ကြီး ၊ တနေ့တော့ လူတယောက်က မြောင်းဘောင်အတိုင်း လျှောက်လာပြီး ဟိုဘက်ကမ်းကို ကူးမယ်လုပ်တယ် ၊ အဲ့မြောင်းထဲမှာ ရေတော်တော်များနေတယ်။ ညက မိုးရွာထားတာကိုး ၊ ခုန်ကူးရအောင်ကလဲ မမီမကမ်းနဲ့ ၊ မြောင်းထဲ ဆင်းကူးယင်လဲ ရေစိုမယ်လေ ၊ ပြီးတော့ ဒီလူကလဲ ခပ်ရွတ်ရွတ်ဆိုတော့ နတ်ကွန်းထဲက နတ်ရုပ်ကြီးကို ဆွဲချလာ၊ မြောင်းပေါ်ခွကျော်ပီး ချ၊ ပီးမှ နတ်ရုပ်ကြီးကို တုံးတံတားလုပ်ပြီး မြောင်းကို ကူးသွားတယ် ၊ ဟိုဘက်ကမ်းအဆင်းမှာ နတ်ရုပ်ကြီး … Read more
မယားငယ်​ ​လေးများယူချင်တယ်ဆို ​ကျွန်​မက ​စေတနာပါပါ ရက်​ရက်​​ရော​ရောကို ကွာရှင်း​ပေးမှာပါ…
မယားငယ်​ ​လေးများယူမယ်​ဆို ​ကျွန်​မက ​စေတနာပါပါ ရက်​ရက်​​ရော​ရောကို ကွာရှင်း​ပေးမှာပါ… အ​ကြွေးစာရင်း😏😏 အိုဘယ့်​ အ​မောင်​​ယောက်ျား မယားငယ်​​လေးများယူမယ်​ဆို ​ကျွန်​မက ​စေတနာပါပါ ရက်​ရက်​​ရော​ရောကို ကွာရှင်း​ပေးမှာပါ ဒါ​ပေမဲ့လို့ ​စေတနာက အလကားမရပါ ရက်​​ရောခြင်းက အပိုမ​ပေးပါ ဒါ​ကြောင့်​ ​အ​ကြွေးစာရင်း​လေး ရှင်းပြီးမှ သွားပါ အ​ကြွေးမ​ကြေပါက မယားငယ်​အိမ်​မသွားရဘဲ ​ ထောင်​ထဲသာသွားရပါမည်​…😏😏 ကိုယ့်​အိမ်​​ထောင်​သက်​နဲ့ပဲတွက်​ပြမယ်​​နော်​… ၁…ကျွန်​မသာ ရှင်​နဲ့မယူခဲ့ရင်​ ကိုယ့်​အလုပ်​နဲ့ကိုယ်​ ရှိ​နေမှာမို့ ကျွန်​မအရည်​အချင်းနဲ့ဆို တစ်​လ လစာ​ငွေ နှစ်​သိန်း​ပြေးမလွတ်​ပါဘူး… တစ်​လ နှစ်​သိန်း တစ်​နှစ်​ ၂၄သိန်း ဆယ်​နှစ်​ သိန်း၂၄၀…💸💸💸💸 ၂…ရှင့်​​ဝေယျာဝစ္စဖိုးက​တော့ အိမ်​​ဖော်​ငှါး သ​လောက်​ပဲယူပါ့မယ်​… တစ်​လ တစ်​သိန်းပဲယူမယ်​​နော်​… ဒါအိမ်​​ဖော်​​ပေါက်​​ဈေး​နော်​… တစ်​လ တစ်​သိန်း တစ်​နှစ်​ ၁၂သိန်း ဆယ်​နှစ်​ သိန်း ၁၂၀…💸💸💸💸 … Read more
ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကပေးတဲ့ ဒေါ်လာသန်း (၅၀)နှင့် ရှေ့ဆက်ရမည့် မြန်မာပြည် ကိုဗစ်တိုက်ဖျက်ရေး
မျှော်တုန်းမျှော်ဆဲ သူလဲရောက်လာ… မနေ့က တချို့က လာပြောကြတယ်။ အစိုးရက ညံ့လို့ ဟိုဟာ မတင်နိုင်လို့ ဒီဟာမတင်နိုင်လို့ World Bank က အကူအညီထောက်ပံ့ငွေမရဘူးပေါ့။ အိန္ဒိယလို နိုင်ငံတောင် ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံရတယ်။ လာအိုက ၁၈ သန်းရတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက သန်း ၁၀၀။ သူတို့ရတာက ၁ပတ် နီးပါးရှိပီ။ လူဦးရေအချိုးအစားနဲ့ တိုင်းပြည်အခြေအနေနဲ့ သေချာတွက်ချက်ပီး ပေးတာပေါ့။ စုံစမ်းကြည့်တော့ မြန်မာနိုင်ငံကလဲ တင်တော့ထားတယ်။ ရမလာသေးဘူးပေါ့။ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဒီငွေကြေးကလဲ အများကြီး အကူအညီဖြစ်စေတယ်လေ။ ဒီနေ့ညနေမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် COVID အရေးပေါ်တိုက်ဖျက်ရေး ရန်ပုံငွေအဖြစ် ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ကြီးတောင် ချပေးလိုက်တာကို ကြားလိုက်ရတယ်။ တကယ်ကို ပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ အစိုးရရဲ့ … Read more
QUARANTINE ဝင်နေရင်း သူရဲဝင်ပူးပြီး ကိုယ့်လက်ကိုယ် ကိုက်စားနေတဲ့ အမျိုးသား (ဗီဒီယိုဖိုင်)
April 27, 2020 by Online Hartha
Quarantine ဝင်နေရင်း သူရဲဝင်ပူးပြီး ကိုယ့်လက်ကိုယ် ကိုက်စားနေတဲ့ အမျိုးသား (ဗီဒီယိုဖိုင်) Quarantine ဝင်နေရင် သူရဲဝင်ပူးပြီး ကိုယ့်လက်ကိုယ် ကိုက်စားနေတဲ့ အမျိုးသားရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို အောက်ဆုံးမှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် …။ တော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းပါပဲ …။ ဘာကြောင့်ဒီလို ဖြစ်သွားတာလဲ …? သရဲဝင်စီးတာလား …? စိတ်ဖိစီးမှု များပီး လွတ်သွားတာလား ….? ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိဘူး ?????????????? မလေးရှားမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ …တိတိကျကျ သိရရင် ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမယ် …။🇲🇾🇲🇾🇲🇾 #Crd Unicode Quarantine ဝငျနရေငျး သူရဲဝငျပူးပွီး ကိုယျ့လကျကိုယျ ကိုကျစားနတေဲ့ အမြိုးသား (ဗီဒီယိုဖိုငျ) Quarantine ဝငျနရေငျ သူရဲဝငျပူးပွီး ကိုယျ့လကျကိုယျ ကိုကျစားနတေဲ့ အမြိုးသားရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျကို အောကျဆုံးမှာ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ …။ … Read more
မော်လမြိုင်မြို့ Quarantine အဆောင်မှ ထွက်ပြေးသည့် လင်မယား တွေ့ရှိပါက သတင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ… မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့၊ ၁၀ မြို့နယ်အဆောင်ဝန်းအတွင်းရှိ မော်လမြိုင်ဆောင်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် Community Based facility Quarantine (CBFQ) ရှိ မော်လမြိုင်အဆောင် အခန်း (၁၅)ရှိ လင်းမယားစုံတွဲနှစ်ဦးသည် ဧပြီ ၂၆ ရက်နေ့က ရေချိုးခန်းသွားစဉ် ထွက်ပြေးသွားကြောင်းသိရှိရပါသည်။ အဆိုပါ လင်းမယားစုံတွဲနှစ်ဦးသည့် မြဝတီနယ်စပ်မြို့တဆင့်ရိုးဂို‌ကျေးရွာ မှဧပြီလ (၁၉) ရက်နေ့တွင် Quarantine ရောက်ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထွက်ပြေးသွားသည့် စုံတွဲနှစ်ဦးအမည်မှာ မြို့ဝတီမြို့နေ အုတ်ဖုတ်လုပ်သား မောင်ဝင်းမင်းထွန်း အသက်(၁၆)နှစ် အဘဦးသောင်းဝင်း၊ မတွယ်တာထွန်း အသက်(၁၅)နှစ် အဘ ဦးခန်းပိုင်း ဖြစ်ပြီးမောင်ဝင်းမင်းထွန်းတွင် ထင်ရှားသည့်အမှတ်သားမျက်နှာညာဘက်ပါးတွင် ဝက်ခြံဘုကြီးတစ်ခုရှိနေကြောင်းသိရသည်။ လင်းမယားစုံတွဲနှစ်ဦး ပျောက်ဆုံးနေသည့်ကို ည … Read more
မြန်မာပြည်က ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားသူများတွင် စမ်းသပ်တွေ့ရှိရသော အခြားသောရောဂါလက္ခဏာများ….
မြန်မာပြည်က ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရသူများတွင် အဖျားလက္ခဏာပြသသူအများဆုံးဖြစ်ပြီး ကူးစက်ခံရသူများထဲမှ ၇၇ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အဖျားလက္ခဏာခံစားရကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ယနေ့ (ဧပြီ ၂၇) တွင် ထုတ်ပြန်သည့် ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေ အစီရင်ခံစာအမှတ်-၂၀ အရ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူများတွင် အဖျားလက္ခဏာခံစားရသူ ၇၇ ရာခိုင်နှုန်း ၊ ချောင်းဆိုးသည့် လက္ခဏာခံစားရသူ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်းခံစားရသူ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း လက္ခဏာကို ခံစားရသူမှာ ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အနံ့အရသာ မခံစားရခြင်း လက္ခဏာကို ခံစားရသူမှာ ၆ ရာခိုင်နှုန်း သာရှိကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် ဖျားခြင်း၊ အစားစားချင်စိတ်မရှိခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်နုံးခြင်းကဲ့သို့ … Read more
← Previous Page1 … Page601 Page602 Page603 … Page607 Next →